How to vote for Moe Set Wine, Miss Universe Myanmar 2013 « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » How to vote for Moe Set Wine, Miss Universe Myanmar 2013
How to vote for Moe Set Wine, Miss Universe Myanmar 2013
အခုပဲ vote လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့မြန်မာကိုကိုယ်စားပြုပြိုင်တာ vote မရင်ဖိုင်နယ်ဆယ်ခြောက်ယောက်မှာမပါတော့ဘူးဆိုလားလို့ပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရေနစ်နေရင်တောင်ဝိုင်းကူပြီကယ်တင်ရတာပဲရှင်၊မိမိတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုကိုယ်စားပြုတာဆိုတော့ဝိုင်းပြီးကူဖို့လိုပါတယ်။တကယ်နီးလာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကိုယ်စားပြုသူကိုမီဒီယာနဲ့တရစပ်တင်လာပါတယ်။ကျွန်မတို့နိုင်ငံကတော့မီးကမရ၊အင်တာနက်ကမကောင်း၊ဒီကြားထဲနိုင်ငံကြီးမီဒီယာတွေနဲ့လဲဝိုင်းပြီးစင်ပေါ်မတွန်းနိုင်ကြတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမြန်မာနိုင်ငံကအလှမယ်လေးတွေကိုသနားမိပါတယ်။ vote အများကြီးရရင်စကာတင်၁၆ယောက်ထဲပါမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မတော့ vote လိုက်ပါတယ်။ (Ohn Mar Oo)
How to vote for Moe Set Wine, Miss Myanmar. Enter your email. Choose Myanmar. Choose 10. Enter code. Certify 16+. Vote and again. (Myo Thein)
ချစ်သောပရိတ်သတ်ကြီးရှင့်ဒီနေ့ကတော့ Vote နောက်ဆုံးနေ့မို့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ Vote ပေးကြပါနော်မိုးစက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ် … မိုးစက်ကိုအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးမရှိရင် မိုးစက်ဆိုတာလည်း ရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒီအတွက် မိုးစက်လည်း အစွမ်းကုန် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် … ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အစွမ်းကုန်ကူညီပေးပါနော် အားလုံးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ရှင့် … (မိုးစက်ဝိုင်)
ဒီလင့်ကတော့ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Miss Universe 2013 ရဲ့ Official မဲပေးလို့ရတဲ့လင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၁) ပထမဦးစွာ ဖော်ပြပါ Link ကိုဝင်ပါခင်ဗျာ။
(၇) 16 နှစ် ပြည့်ပြီးကြောင်း အမှန်ခြစ်ပါ…
http://www.missuniverse.com/members/profile/657643/year:2013 Account တစ်ခုထဲနဲ့ တစ်နေ့ကို ၁၀ ခါ vote လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီလင့်မှ vote အများဆုံးရရင် semifinal မှာ Top 16 ထဲအလိုလိုပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Miss Myanmar Universe ကို တခြား Link တွေမှာVote ပေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့…
link 1 > https://apps.tradablebits.com/fb/J1ub ********************************************** link2> https://apps.tradablebits.com/tb_app/344115 ********************************************** link3> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=737371269612473&set=a.736780243004909.1073741997.138158146200458&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1380385_737371269612473_1437171291_n.jpg&size=600%2C781 ********************************************** Lin4> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542930209119966&id=365367010209621&set=a.533645426715111.1073741838.365367010209621&refid=28&_ft_=qid.5933491736509809448%3Amf_story_key.2805417564594708318
ဒီလင့်ကတော့ Beauty Pageant Grand မှ ချီးမြှင့်သော People Choice Award အတွက်ပါခင်ဗျာ…
Link5> https://www.facebook.com/pageantology/app_132135060276274 ********************************************** Link6> http://www.pageantology.net/
ဒီ Website ရဲ့စာမျက်နှာ မှာ Voting ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ… အဲဒီမှာ Myanmar ဆိုတာလေးကို လိုက်ရှာပြီး ကလစ် တစ်ချက် နိပ်ပြီး အမှန်ခြစ်ကလေး ခြစ်ပေးပါခင်ဗျာ…
Link7> https://apps.tradablebits.com/tb_app/342959 Miss Universe 2013 People’s Choice! အတွက်ပါ တစ်နေ့ကို ၁၉ ကြိမ် vote ပေးလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ….
Link 8 > http://kattera.wordpress.com/2013/10/11/miss-universe-2013-poll/ MISS UNIVERSE WOMEN.RU ဆိုတဲ့ Website ဟာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ဂျာနယ်တိုက်တွေထဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ Website မှာ မဲအများဆုံးရတဲ့သူကို ဒီဂျာနယ်တိုက်ကြီး ကဆုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုအနေအထားကတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကျေးဇူးကြောင့် မဲအရေအတွက်မှာ နေရာတကာနီးပါး ကျွန်တော်တို့မြန်မာက
မြန်မာ အကြောင်း ကမ္ဘာ ကသိစေနိုင်ဖို့ …
Tags: 1990 election, 2008 constitution, 2010 election, Article, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi said "The Results of the 1990 General Elections Must Be Implemented", bdcburma, Burma Today Burmese Regime 2010 Election NCUB NLD (LA) Myanmar Myint Soe, Keywords burmatoday burmese news burmanet aung san suu kyi berma bagan khit pyaing irrawaddy dvb no burmese dvb burmese news mizzima burmese the irrawaddy irrawady aung san suu burmese genocide buy bu, News Music Life Rubble Politics Family Photography Travel Art Personal Food Religion Christmas Holidays Movies Poetry Random Books Culture Love Thoughts Writing Photos Fashion Video Friends Events Vid
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 08/11/2013 .
← Burma (Myanmar): Press Release of Constitutional Reform Network	Myo Yan Naung Thein with Obama →